समाचार – Page 1672 – Sagarmatha TV
साउदीमा ६ वर्षदेखि बन्धक निर्मला स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । ६ वर्ष पहिलेदेखि साउदीको एउटा घरमा बन्धक बनेकी निर्मला तामाङ घर फर्किएकी छन्। घरेलु कामदारको रुपमा साउदी पुगेकी सुनसरीको भरौलाकी निर्मलालाई घर मालिकले परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिएका थिएनन्। निर्मला त्यो घरबाट भागेर अर्कै घरमा पुगेपछि परिवारको सम्पर्कमा आएपछि उनलाई उद्दार गर्न सकिएको हो। निर्मला बेपत्ता भएको भन्दै परिवार चिन्तामा थिए। निर्मलाले साउदीमा काम […]
काठमाडौं – रसिया लगेर कृषि फार्ममा जागिर लगाईदिने भन्दै ३१ जनालाई ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसान्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललितपुरका राजु तामाङ, ज्ञान गोविन्द बैद्य र सिन्धुपाल्चोकका जगत बहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा छापिएको छ । उनीहरुले ३१ जनासँग ४५ लाख रुपैयाँ ठगी […]
ज्युँदी महिलालाई पनि मृत प्रमाणित !
बाटुलीमाया चेपाङको नागरिकतामा जन्म मिति २००१ साल छ । उनले राज्यले दिने बृद्ध भत्ता बुझ्दै आएकी थिइन् । गएको साउनमा आफ्नो भत्ता लिन उनी वडा कार्यालय पुगिन् । कालिका नगरपालिका ११ वाङथालमा उनको घर छ । घरदेखि दुइ घण्टा परको वडा कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले उनलार्य बृद्धभत्ता नपाउने बताए । वडा कार्यालयमा उनको मृत्यु भएको विवरण […]
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका सञ्चालकले ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको पाइएको छ । कलेजको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अनियमितता भएको पाइएको हो । कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चालक समिति सदस्य […]
दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणीको पूजा–आरधना
काठमाडाैं । नेपालीहरुको महान चाड बडा दसैंको दोस्रो दिन आज विभिन्न शक्तिपीठहरुमा ब्रह्मचारीको पूजा आरधना गरिदैछ । नवरात्रभर नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार आज ब्रह्मचारीणीको पूजा गरिन्छ । पूजा आजाका लागि विहानैदेखि शक्तिपीठहरुमा भक्तजनहरुको भीड लागेको छ । नवरात्रको अवधिभर बिभिन्न देवी देउता र शक्तिपिठहरुमा एक चित्त र एकाग्र भइ ब्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने […]
वामदेवका विषयमा प्रचण्डले पोल खोले
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा नेता वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले नेता गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा ल्याउने सन्दर्भमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ का सांसद रामवीर मानन्धर ले राजीनामा दिने चर्चाबारे पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सिट […]
अल्ट्रा धाविका मीरा राई अमेरिकामा सम्मानित
काठमाडौं । अमेरिकामा नेपाली अल्ट्रा धाविका मिरा राई सम्मानित भएकी छन् । एशिया शोसाइटीले प्रदान गर्ने ‘गेम चेन्जर अवार्ड’बाट नेपाली चेली मिरा सम्मानित भएकी हुन् । युन्योर्कमा आयोजित भब्य समारोहमा मिरासँगै विभिन्न क्षेत्रका ९ जनालाई यस अर्वाडबाट सम्माजित गरिएको थियो । उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ‘आज मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट पल हो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै […]
दशैं टिकटमा मनपरीः कोही रित्तो हात, कोहीलाई फालाफाल !
गोंगबु बसपार्क पुगेका अर्घाखाँचीका सयौज पोख्रेल टिकट काउन्टरमा पुग्नुभयो । अर्घाखाँची सन्धीखर्कका लागि टिकट दिनुस् भनेर काउन्टरका कर्मचारीसँग टिकट माग्नुभयो । काउन्टरका कर्मचारीले भने– ‘२७ गतेको टिकट प्याक छ । बिहानै आउनुहोला । गाडी थप गर्छौं ।’ अन्ततः सयौज टिकट नै नलिई रित्तै हात फर्किनुभयो । घर जान टिकट लिन बसपार्क पुगेका केशव पाण्डेले भन्नुभयो– […]
वामदेवको “बालहठ”ले नेकपा शीर्ष तहमै विवाद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक एकतालाई लिएर विवाद चुलिरहेका बेला नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन लड्ने विषयले झनै विवाद बढाएको छ । नेकपाले बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित नेता गौतमलाई काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेपछि यसले विवाद भने चर्काएको हो । मंगलबार नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले […]
पाँच लाख घुससहित सहन्यायाधिवक्ता पक्राउ
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा पक्राउ परेका छन् । ठगी मुद्धाका प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने सर्तम ५ लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै उनी समातिएका हुन् । घुस रकम लिएको सुचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीसहितको टोलीले थापालाई कार्यालयबाटै पक्रिएको हो । थापा समातिँदा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे […]